Ergooyinkii dhexdhaxaadinta ka waday beelihii ku dagaalamay miyiga degmada Rako oo ka hadlay natiijadii kasoo baxday heshiisiinta beelaha. – Radio Daljir
Boosaaso,Dec,19 -Kulan balaaran oo ay kasoo qaybgaleen nabadoono,cuqaal iyo isimo dhexdhaxaadin ka dhexwaday labadii beelood ee ku dagaalantay miyiga degmada Rako ee gobolka Karkaar ayaa maanta lagu qabtay hoolka shirarka Rugta Ganacsiga iyo Warashada Puntland.
Kulanka ayaa waxaa ugu horayntii hadal ka jeediyay beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasiin oo hogaaminayay ergooyinkii nabadaynta ahaa ee kabaxay gobolka Bari,waxaana ugu horayntii uu sheegay in lagu guulaystay dhexdhexaadinta labada beelood islamarkaana ay tahay wax lagu farxo beelihii dagaalamay oo si wadajir ah isku dhexgalaya.
“Waxaa farxad ah beelihii dagaalamay oo wada fadhiya oo leh aan heshiino oo maxaan ku dagaalamaynaa”ayuu yiri gudoomiyaha ergooyinka nabadaynta ee kasocday gobolka Bari oo dhinaca kale sheegay in beelkasta laga dhaariyay min 25 xubnood islamarkaana ay balanqaadeen inay iscafiyaan.
Nabadoon Cabduqaadir Axmed Ibraahim oo ka mid ahaa ergooyinkii nabadaynta ee gobolka Bari ayaa dhankiisa sheegay in lasoo gabagabeeyay colaadii dhexmartay labada beelood ee Cali Saleebaan iyo Muuse Saleebaan.
“Waxaa lasoo gunaanaday dhexdhexaadintii labada beelood ee Cali Saleebaan iyo Ugaar Saleebaan,waxaana heshiiska kasoo baxay ka mid aha in dhibaatadii dhacday aanay mar kale soo noqon,go’aanka heshiiskana waxaa kasoo shaqeeyay dhamaan ergadii nabadaynta ahaa ee ka kala socday gobolada Puntland”ayuu yiri nabadoon Cabdiqaadir Xarago.
Nabadoonka oo aqrinaya go’aamadii kasoo baxay heshiisiinta laba beedlood ayaa yiri
“Dhimasho 350-qof Waxaa lagu heshiiyey %95 mag in lakala qaato,halka %5 loo celiyay in lagu kala qaato shareeco, dhaawaca oo noqday 70 qof waxaa lagu heshiiyay in shareecada islaamka lagu simo waqtiga loo balamay kala wareejinta magta,hantida lakala heestay ee 35 geela ah waxaa lagaga heshiiyay in la isku celiyo oo deegaanka uu dhamastiro”ayuu yiri Nabdoon xarago oo aqrinayay heshiiska laga gaaray colaada miyiga degmada Rako isagoona sheegay heshiisku inuu qayb ka yahay hadii qofkii qof kale si kas ah u dila in lagu fulin doono shareecada islaamka.
Si kastaba,heshiisiiska laga gaaray colaada miyiga degmada Rako oo u dhaxeysay laba beelood oo walaalo ah ayaa la filayaa in gabi ahaanba soo afjarto dhibaatooyinka u dhaxeysay labadada beelood oo marar badan soo noqnoqatay.
Salmaan Jamaal Saciid (Kaka)